Xiisad ka taagan gobolka Gedo kadib markii ay ciidanka Macallimuu xoog ku galeen… | Dalkaan.com
Home Warkii Xiisad ka taagan gobolka Gedo kadib markii ay ciidanka Macallimuu xoog ku...
Xiisad ka taagan gobolka Gedo kadib markii ay ciidanka Macallimuu xoog ku galeen…
Muqdisho (dalkaan) – Magaalada Garbahaarey waxaa ka taagan xaalad ka dhalatay, kadib markii ciidan uu wato Gudoomiyihii hore ee Gobolka Gedo, Cismaan Nuur Xaaji (Macalimu) ay xoog ku galeen Xarunta Degmada, taas oo aad mooddo inay ku kala qayb samayn Saraakiisha Ciidamada qaarkood.
Macalimuu oo Isniintii shir jaraa’id ku qabtay Xarunta Degmada ayaa sheegay inaanu Gobolka Gedo lahayn wax Gudoomiye ah, isagoona Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ugu baaqay inuu isaga usoo magacaabo Gudoomiyaha Gobolka, si shaqadii gobolka uu u dardargeliyo.
“Qoom haddii Ilaahay masiibo la damco, masuuliyiin xun xun baa la daba dhigaa, waa niman ah xamaaliyiintii dowladaha deriska laga soo bilaabo 1997-2020. Niman Addis Ababa iyo Nairobi laga soo carbistay bay nimankaasi ahaayeen. Niman caan ku ah xumaanta baa gobolka looga dhigay Gudoomiye, dadkuna waxay is weydiinayaan Macalimuu iyo Canjeer Buulle Gareed kee baa fiican,” ayuu yiri Korneyl Aadan Axmed Xirsi oo Warbaahinta gudaha la hadlay.
Previous articleAl-Shabab oo mar kale meel fagaare ah ku toogatay dad shacab ah + Magacyada
Next articleMidowga Musharaxiinta Soomaaliya ma waxay ku midoobayaan hal musharax?